Budata Bandicam maka Windows
Free Budata maka Windows (22.30 MB)
Bandicam bụ onye na -edekọ ihuenyo efu maka Windows. Karịsịa, ọ bụ mmemme ndekọ obere ihuenyo nwere ike weghara ihe ọ bụla na kọmputa gị dị ka vidiyo dị elu. Ị nwere ike ịdekọ otu mpaghara na ihuenyo PC, ma ọ bụ ị nwere ike ịdekọ egwuregwu site na iji teknụzụ eserese DirectX/OpenGL/Vuhan. Bandicam nwere oke mkpakọ ma na -enye arụmọrụ dị elu karịa na mmemme ndekọ ndekọ ndị ọzọ na -enweghị ịchụ mma vidiyo.
Bandicam bụ mmemme idekọ ihuenyo na -enyere ndị ọrụ kọmputa aka ịdekọ vidiyo egwuregwu na idekọ vidiyo ihuenyo, yana inwe atụmatụ ndị ọzọ bara uru dị ka nseta ihuenyo.
Site na mmemme na -enye gị ohere ịdekọ ọrụ ọ bụla ị na -eme na desktọpụ dị ka vidiyo, ị nwekwara ohere ịhọrọ akụkụ nke ihuenyo ịchọrọ ịdekọ. Ị nwere ike kpebie ngwa ngwa ngalaba nke ị ga -edekọ site nenyemaka nke mpio mepere emepe nke oghere ime ọ na -enye gị.
Akụkụ kasịnụ nke na -amata Bandicam na mmemme ndekọ ihuenyo ndị ọzọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na nhọrọ dị elu ọ na -enye ndị ọrụ maka ịdekọ vidiyo egwuregwu. Site na ngwanrọ na -akwado ma OpenGL na DirectX, ị nwere ike ịdekọ vidiyo nke egwuregwu niile ị na -egwu wee lelee ụkpụrụ FPS nke egwuregwu noge ndekọ.
Site na Bandicam, nke na -enye gị ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka vidiyo ịchọrọ ịdekọ, ị nwere ike ikpebi FPS, ogo vidiyo, ugboro ụda, bitrate, usoro vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ nịchọrọ, ị nwekwara ike ịtọ oke maka vidiyo, dịka oge ma ọ bụ nha faịlụ.
Ewezuga usoro ndekọ vidiyo vidiyo, ị nwere ohere iji nseta ihuenyo site na enyemaka nke mmemme. Bandicam, nke na -enyekwa gị ohere ị nweta nseta ihuenyo nụdị BPM, PNG na JPG, ka ọtụtụ ndị ọrụ kọmputa na -ahọrọ ọbụlagodi ekele maka njirimara a naanị.
Ị nwere ike dezie ụzọ mkpirisi keyboard na Bandicam, nke bụ otu nzọ nihu ndị asọmpi ya nihi nkwado asụsụ English, ị nwere ike ịmalite ihuenyo ma ọ bụ usoro ndekọ vidiyo egwuregwu ngwa ngwa site na ịpị naanị otu igodo na keyboard gị.
Agbanyeghị na Bandicam bụ sọftụwia akwụ ụgwọ, yana ụdị Bandicam nefu, a na -enye ndị ọrụ ikike ịdekọ ihe ruru nkeji iri nke egwuregwu ma ọ bụ vidiyo ihuenyo, mana ọ bara uru ịmara na agbakwunyere akara mmiri Bandicam na vidiyo ị dekọrọ.
Na mmechi, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwanrọ nwere atụmatụ dị elu ka ịdekọ vidiyo ihuenyo ma ọ bụ vidiyo egwuregwu, ị kwesịrị ịnwale Bandicam.
Etu esi eji Bandicam eme ihe?
Bandicam na -enye nhọrọ atọ: ihe ndekọ ihuenyo, ndekọ egwuregwu na ndekọ ngwaọrụ. Yabụ na mmemme a, ị nwere ike chekwaa ihe niile na enyo kọmputa gị dịka faịlụ vidiyo (AVI, MP4) ma ọ bụ faịlụ onyonyo. Ị nwere ike ịdekọ egwuregwu na ogo 4K UHD. Bandicam na -eme ka o kwe omume ijide vidiyo 480 FPS. Ihe mmemme a dịkwa maka Xbox, PlayStation, smartphone, IPTV, wdg. Ọ na -enye gị ohere ka ịdekọ site na ngwaọrụ.
Iji Bandicam were were/see vidiyo ihuenyo dị mfe. Kpatụ akara ngosi ihuenyo nakụkụ aka ekpe elu, wee họrọ ọnọdụ ndekọ (ihuenyo ele mmadụ nihu, ihuenyo zuru oke, ma ọ bụ mpaghara cursor). Ị nwere ike malite ịdekọ ihuenyo site na ịpị bọtịnụ REC uhie. F12 bụ igodo ọkụ iji malite/kwụsị ndekọ ihuenyo, F11 were nseta ihuenyo. Na ụdị efu ị nwere ike idekọ nkeji iri wee tinye akara mmiri notu akụkụ ihuenyo ahụ.
Ịdekọ na idekọ egwuregwu na Bandicam dịkwa mfe. Pịa akara egwuregwu ahụ site nakụkụ aka ekpe elu wee pịa bọtịnụ REC uhie ka ịmalite ndekọ. Ọ na -akwado ịdekọ ihe ruru 480FPS. Nakụkụ bọtịnụ ndekọ, ị nwere ike ịhụ ozi dịka oge ole ị na -edekọ, ole ohere ịdekọ vidiyo ga -anọ na kọmputa gị.
Site na Bandicam, ị nwekwara ohere ịdekọ enyo site na ngwaọrụ vidiyo mpụga. Xbox gị, egwuregwu egwuregwu PlayStation, ama, IPTV wdg. Ị nwere ike weghara ndekọ ihuenyo site na ngwaọrụ gị. Iji mee nke a, pịa akara ngosi HDMI nakụkụ aka ekpe nke mmemme ahụ, wee họrọ ngwaọrụ (nhọrọ atọ pụtara: HDMI, kamera weebụ na console). Malite ndekọ site na ịpị bọtịnụ REC mbụ.
Ị nwere ike ịhụ otu esi eji ndekọ ihuenyo Bandicam, ndekọ egwuregwu na ọnọdụ ndekọ ngwaọrụ na vidiyo dị nokpuru:
Nha faịlụ: 22.30 MB